搜索 Ā 的结果：
āguṃ （hiyyattanīç ajjattanīç kālātipatti-hūsoavi eiea acanitealāso） ]a].
အာဂုံ （ဟိယျတ္တနီ，အဇ္ဇတ္တနီ，ကာလာတိပတ္တိ-ဟူသော အတိတ် ဝိဘတ်တို့ကြောင့် ဓာတ်၏ အစ၌လာသော） ＇အ＇။
ā-upasāra （saṃyogepare rassattaṃ-aññī） rassapruso ]a].
အာ-ဥပသာရကို （သံယောဂေပရေ ရဿတ္တံ-နှင့်အညီ） ရဿပြုသော ＇အ＇။
so akkharā a-aca-kaṇṭhaja-sara-rassa-akkharā.
လေးဆယ့်တစ်လုံးသော အက္ခရာတို့တွင် အဦး-အစ-ကဏ္ဌဇ-သရ-ရဿ-အက္ခရာ။
a：[prefix] prefix ā shortened beforeadouble consonant e.g. ā + kosati = akkosati；anegative prefixed to nouns，adjectives； and participles； e.g. na + kusala = akusala； the augment prefixed to some roots in the Past and Conditional Tenses； e.g. akāsi.
a：and beforeavowel an-，A negative particle，used only as an inseparable prefix，compounded with nouns and adjectives
A：Tiếp đầu ngữ [a] đứng trước2phụ âm thì đọc giọng vắn，như ā+kosali akkosali； một tiếp đầu ngữ có nghĩa không với danh từ，tĩnh từ và phân từ，như na+kusala akusala； sự thêm vào đầu cho một vài ngữ căn của thì quá khứ và thì điều kiện cách，như akasi
န＇နိပါတ်၏ အာဒေသ-ပဋိသေဓ （တားမြစ်ခြင်းအနက်ရှိသော）-＇အ＇။ （၁） ဆန့်ကျင်ဖက်။ （၂） ဆုတ်ယုတ်ခြင်း။ （၃） တိုးပွါးခြင်း，ကြီးမြတ်ခြင်း။ （၄） အခြားတစ်ပါး။ （၅） မရှိခြင်း，ကင်းခြင်း။ （၆） ဆိတ်သုဉ်းခြင်း။ （၇） မသင့်လျော်ခြင်း။ （၈） အနည်းငယ်။ （၉） ဖြတ်ခြင်း။ （၁ဝ） မရောယှက်ခြင်း။ （၁၁） အတူ။
ဘူ+စု = ဂတိ ပူဇာ ဝိသေသေသု-သွားခြင်း，ပူဇော်ခြင်း，အထူးပြုခြင်းတို့၌။ အဉ္စတိ၊ အဉ္စေတိ၊ အဉ္စယတိ။ အ-ဂတိယံ ပူဇာယဉ္စ အဗျတ္တသဒ္ဒေ စ၊ အဉ္စတိ။ ဝါစပ္ပတိ။
Ā，【无】 一直到，等于。 【介】 从，向。（p49）
ā，1 巴利文字母表的罗马化拼音第二个母音字母。发音好像汉语中阴平的 a。
ā，（ind.），up to. （prep.） from； towards.
Ā，1 （indecl.） [Vedic ā，prep. with Acc.，Loc.，Abl.，meaning “to，towards”，& also “from”. Orig. an emphatic-deictic part. （Idg. *ē） = Gr. h]_ surely，really； Ohg. --ā etc.，increment ofa（Idg. *e），as in Sk. a-sau； Gr. ekeί （cp. a3），see Brugmann，Kurze Vergl. Gr. 464，465]afrequent prefix，used as well-defined simple base-prefix （with rootderivations），but not as modification （i. e. first part ofadouble prefix cpd. like sam-ā-dhi） except in one case ā-ni-saṁsa （which is doubtful & of diff. origin，viz. from combn. āsaṁsa-nisaṁsa，see below 3b）. It denotes either touch （contact） orapersonal （close） relation to the object （ā ti anussaraṇ’atthe nipāto PvA.165），or the aim of the action expressed in the verb. -- （1.） As prep. c. Abl. only in J in meaning “up to，until，about，near” J.VI，192 （ā sahassehi = yāva s. C.），prob.alate development. As pref. in meaning “forth，out，to，towards，at，on” in foll. applications：-- （a） aim in general or touch in particular （lit.），e. g. ākaḍḍhati pull to，along or up； °kāsa shining forth； °koṭeti knock at； °gacchati go towards； °camati rinse over； °neti bring towards，ad-duce； °bhā shining forth； °bhujati bend in； °masati touch at； °yata stretched out； °rabhati at-tempt； °rohana a-scending； °laya hanging on； °loketi look at； °vattati ad-vert； °vahati bring to； °vāsa dwelling at； °sādeti touch； °sīdati sit by； °hanati strike at. -- （b） in reflexive function：close relation to subject or person actively concerned，e. g. ādāti take on or up （to oneself）； °dāsa looking at，mirror； °dhāra support； °nandati rejoice； °nisaṁsa subjective gain； °bādha being affected； °modita pleased； °rakkha guarding； °rādhita satisfied； °rāma （personal） delight in； °lingati embrace （to oneself）； °hāra taking to （oneself）. -- （c） in transitive function：close relation to the object passively concerned，e. g. āghātana killing； °carati indulge in； °cikkhati point ont，explain； °jīva living on； °ṇāpeti give an order to somebody； °disati point out to some one； °bhindati cut； °manteti ad-dress； °yācati pray to； °roceti speak to； siñcati besprinkle； °sevati indulge in. -- （d） out of meaning （a） develops that of an intensive-frequentative prefix in sense of “all-round，completely，very much”，e. g. ākiṇṇa strewn all over，°kula mixed up； °dhuta moved about； °rāva shouting out or very much； °luḷati move about； °hiṇḍati roam about. -- 2. Affinities. Closely related in meaning and often interchanging are the foll. prep. （prefixes）：anu （°bhati），abhi （°saṁsati），pa （°tapati），paṭi （°kaṅkhati） in meaning 1 a-c； and vi （°kirati，°ghāta，°cameti，°lepa，°lopa），sam （°tapati，°dassati） in meaning 1 d. See also 3b. -- 3. Combinations：（a） Intensifying combns. of other modifying prefixes with ā as base：anu + ā （anvā-gacchati，°disati，°maddati，°rohati，°visati，°sanna，°hata），paṭi + ā （paccā-janati，°ttharati，°dāti，°savati），pari + ā （pariyā-ñāta，°dāti，°pajjati，°harati），sam + ā （samā-disati，°dāna，°dhi，°pajjati，°rabhati）. -- （b） Contrast-combns. with other pref. inadouble cpd. of noun，adj. or verb （cp. above 2） in meaning of “up & down，in & out，to & fro”； ā + ni：āvedhika-nibbedhika，āsaṁsa-nisaṁsa （contracted to ānisaṁsa），āsevita-nisevita； ā + pa：assasatipassasati （where both terms are semantically alike； in exegesis however they have been differentiated inaway which looks likeadistortion of the original meaning，viz. assasati is taken as “breathing out”，passasati as “breathing in”：see Vism.271），assāsa-passāsa，āmoditapamodita，āhuna-pāhuna，āhuneyya-pāhuneyya； ā + paccā：ākoṭita-paccākoṭita； ā + pari：ākaḍḍhana-parikaḍḍhana，āsaṅkita-parisaṅkita； ā + vi：ālokita-vilokita，āvāha-vivāha，āveṭhana-viniveṭhana；a+ sam：allāpa-sallāpa：ā + samā：āciṇṇa-samāciṇṇa. -- 4. Before double consonants ā is shortened toaand words containing ā in this form are to be found under a°，e. g. akkamaṇa，akkhitta，acchādeti，aññāta，appoṭeti，allāpa，assāda. （Page 92）
ā：Until； as far as compounded with nouns：Much used in combination with verbs and their derivatives.
Ā：[in]đến prep từ，về hướng
＇အာ＇အက္ခရာ၊ ＇အာ＇သရ၊ လေးဆယ့်တစ်လုံးသော အက္ခရာ，ရှစ်လုံးသော သရတို့တွင် နှစ်လုံးမြောက်-လည်ချောင်းအရပ်၌ ဖြစ်သော （ကဏ္ဌဇ）-ရှည်သော အသံဖြင့် ရွတ်ဆိုအပ်သော （ဒီဃ）-နိဂဟိတ်မှတစ်ပါး သုံးဆယ့်နှစ်လုံးသော ဗျည်းတို့၏မှီရာ （နိဿယ） နှစ်လုံးသော ဗျည်းတို့၏မှီရာ （နိဿယ）-အက္ခရာ-သရ။
လိင်，ဓာတ်တို့နောင်-စီရင်အပ်သော-သက်သော-ပစ္စည်းဖြစ်သော အာ။ ၎င်းအာ-ပစ္စည်းသည် （၁） ဣတ္ထိလိင်အဖြစ် ထင်ရှားစေရန် သက်သော （ဣတ္ထိဇောတက） အာပစ္စည်း။ （၂） သမာသ်ပုဒ် အဆုံး၌သက်သော （သမာသန္တ） အာပစ္စည်း။ （၃） ကတ （=ပြုလုပ်အပ်သော အရာဟူသော） အနက်၌ သက်သော တဒ္ဓိတ် အာပစ္စည်း။ （၄） သု-ဓာတ်နောင် （ကတ္တား အနက်၌¿） သက်သော အာပစ္စည်းဟူ၍ ၄-မျိုးရှိသည်။ ဥဒါဟရုဏ် ပုံစံတို့ကား။
ဓာတ်တို့နောင် စီရင်အပ်သော ဝိဘတ်ဖြစ်သော အာ။ ၎င်း-အာဝိဘတ်သည် （၁） အာချာတ်၊ ဟိယျတ္တနီဝိဘတ်，ပရဿပုဒ်，ပဌမပုရိသ်，နာမယောဂ，ဧကဝုစ် အာ-ဝိဘတ်။ （၂） အာချာတ်၊ အဇ္ဇတနီ ဝိဘတ်，အတ္တနော ပုဒ်，ပဌမပုရိသ်，နာမယောဂ，ဧကဝုစ် အာဝိဘတ် ဟူ၍ ၂-မျိုးရှိသည်။
သဒ္ဒါအစီအရင်ဖြင့် အခြားသော အက္ခရာတို့မှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ၊ （၁） （က） သန္ဓိစပ်ရာ၌ အသရမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ အံ-ကြည့်။ （ခ） ဏ-အနုဗန် ပါရှိသော ပစ္စည်းကြောင့် အသရမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （ဂ） သင်္ချာအရာ၌ အသရမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （၂） （က） ဏ-အနုဗန်ရှိသော ပစ္စည်းကြောင့် ဣသရ-မှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （ခ） သင်္ချာအရာ၌ ဣသရမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （ဂ） ဓာတ်၏စိတ် ဣသရမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （၃） （က） ဏ-အနုဗန်ရှိသော ပစ္စည်းကြောင့် ဥသရမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （ခ） ဒွန်သမာသ်အရာ၌ မာတု-စသည်တို့၏ ဥသရမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （၄） ဩသရမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （၅） နံ-ဝိဘတ်ကြောင့် တသဗ္ဗနာမ်ပုဒ်မှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ （၆） ဥန-သဒ္ဒါမှ ပြောင်းလဲလာသော အာသရ။ အာ-（၄） ကြည့်။ ဤသို့ စသည်ဖြင့် သဒ္ဒါအစီအရင်ဖြင့် ပြောင်းလဲလာသော အာသရတို့မှာ များစွာပင် ရှိပေသည်။ （၇） လာသော （အာဂုံ） အာသရ။
ရှေးရှုသည်၏အဖြစ်၊ အထက်၌ ပြုခြင်း၊ ပိုင်းခြားခြင်း၊ ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ရောက်ခြင်း၊ လိုချင်ခြင်း၊ ပိုက်ပွေ့ခြင်း၊ အစပြုခြင်း၊ ယူခြင်း၊ နေခြင်း၊ အနီး၊ ခေါ်ခြင်း စသော အနက်တို့၌ ဖြစ်သော ဥပသာရပုဒ်။
အာဣတိ အဘိမုခဘာဝုဒ္ဓကမ္မမရိယာ ဒါဘိဝိဓိပတ္တိစ္ဆာပရိဿဇနာဒိကမ္မဂဟဏနိဝါသနသမီပဝှါနာဒီသု အတ္ထေသု ဝတ္တတိ။ ရူပသိဒ္ဓိ။ အာပဗ္ဗတာ၊ တောင်တိုင်အောင်။ အာသတ္ထပရိသမတ္တိယာ၊ ကျမ်းပြီးသည်တိုင်အောင်။
与 Ā 相似的巴利词：